Ngokuvamile, ukuvuka ekuseni, umuntu uthola iziqholo ezingenangqondo nezimbi esikhumbeni sobuso. Ayini ama-abscesses? Kungani bevela? Ngingabasusa kanjani ngaphandle kokulimaza impilo yami? Amadoda nabesifazane abaningi banesithakazelo kule mibuzo.
I-abscess esikhumbeni yimbangela yenqubo yokuvuvukala ehambisana nokubunjwa kwe-pus. Ezimweni eziningi, ukubukeka okunjalo kungumphumela womsebenzi wezinambuzane ezincane ze-pathogenic. Ulcer ingaba nobukhulu obuhlukile. Ngaphezu kwalokho, angeke kwenzeke kuphela ebusweni, kodwa nanoma iyiphi enye indawo yesikhumba.
Izikhungo zokuvuvukala zingahlala phansi njengezingxenyeni eziphezulu zesikhumba (ezimweni ezinjalo izixuku ezihlanjululwayo zihlangana emkhathini), futhi ngokujulile. Isikhumba esiseduze ne-abscess, njengombuso, siphendukile futhi sishaye.
Kungani ama-abscesses avela?
Kukholelwa ukuthi izingane ezisencane kuphela zingabhekana nezimbungu. Eqinisweni, abantu abaneminyaka ehlukene babhekene nale nkinga. Ngokuqinisekile, ukutholakala kwama-acne kungabonisa ukuphazamiseka kwe-hormone emzimbeni, kodwa lokhu akusona isizathu esisodwa.
Ngokuvamile, ukubukeka kokuvuvukala kuhlotshaniswa nezinye izici zesikhumba.
Ukunikezwa ngokweqile kwe-sebum kuholela ekuvinjweni kwe-pores, okufaka phakathi nokusebenza kwe-microflora ye-pathogenic nokuqala kwenqubo yokuvuvukala.
Kwamanye abantu, ama-abscesses angumphumela we-keratosis. Ngenxa yokwephulwa okunjalo, ukuhlanganiswa kweziqephu ze-corneal yesikhumba kubonakala, ngenxa yalokho ukuvalwa kwezingqimba ze-sebaceous kuba nzima.
Kukhona isifo esibizwa ngokuthi "induna yezokwelapha". Ezimweni ezinjalo, ukubukeka kwamagceke esikhumbeni kungumphumela wokusetshenziswa isikhathi eside kwezidambisigciwane noma izidakamizwa ezilwa nokuvuvukala.
Kwezinye izimo, imbangela yalesi sifo iwukukhubazeka kwesistimu yomzimba. Uma umzimba ungenakuzivikela, ukucubungula kwe-microflora ngokomzimba, kubangela ukuvuvukala kwesikhumba.
Ungakhohlwa ngokudla okunempilo efanele. Ukusetshenziswa kwenani elikhulu lamaswidi, izinongo, izitsha ezinamafutha kuholela ekuguqulweni kokumakhemikhali kwe-sebum, okuphinde futhi, kuqukethe ukusebenza kwebhaktheriya futhi - ngenxa yalokho - inqubo yokuvuvukala.
Ngakolunye uhlangothi, esinye sezimbangela ezivame kakhulu zezilonda asinelisekile noma asanele ngokwengqondo.
Izifo ezihambisana nokubukeka kwezingulube ezihlanzekile
Uma unesithakazelo kumbuzo mayelana nokuthi yiziphi izigqila nokuthi kungani zivela, kufanele wazi ukuthi kwezinye izimo ukubonakala kwe-acne engathandeki kuhlotshaniswa nokuthuthukiswa kwesifo. Ngokuvamile, ama-abscesses amaningi akhombisa ukuthi kukhona ama-acne. Ngaphezu kwalokho, izimbangela zihlanganisa izifo zesikhumba ezihlukahlukene ze-fungal , i- dyshidrosis, i-impetigo, ama-shingles, ama-scabi, i-hydradenitis e-purulent. Kwesinye isikhathi izimpungushe ze-purulent zifakazela ukuthi i-folliculitis, ngezinye izikhathi ziphakama futhi zihambisane nesizinda se-psoriasis.
Ngokuqinisekile, ama-abscesses, ikakhulukazi uma ebonakala kaningi ngokwanele, yisisusa esihle sokuxhumana nodokotela we-dermatologist. Yiqiniso, ungazama ukuziqeda wena, kodwa ukuzivocavoca kungaholela emiphumeleni emibi, kufaka phakathi ukuvuvukala okukhulu nokubunjwa kobunzima, okungeke kubhekwe njengokuhlobisa.
Udokotela ozofika uzohlinzekela ukwelashwa okufanele emva kokuhlola nokuthola umphumela wezivivinyo. Phela, ukwelapha kulokhu kuxhomeke ikakhulukazi kwizimbangela ze-acne purulent. Njengomthetho, iziguli zijwayele ukuthi zenziwe ama-antibacterial akhethekile - zingaba ama-creams, amafutha okugcoba, ama-lotions, izixazululo, njll. Ngokuphumelelayo kukhona amalungiselelo aqukethe i-benzoyl peroxide. Uma ama-abscesses ebusweni angumphumela wokuhluleka kwe-hormonal, kungase kuphakanyiswe ukuthatha imithi yama-hormonal. Ngokuncipha okunamandla emzimbeni wokuzivikela, ama-immunomodulators namayeza e-vithamini azosiza. Kwezinye izimo, odokotela batusa ukuhlanza isikhumba. Kodwa khumbula, awukwazi ukucindezela ama-pimples ngokwakho - ungabasusa kuphela kudokotela-cosmetologist! Uma i-abscess inkulu futhi isikhumba esizungezile sishaywe, ukungenelela kokuhlinzwa kungadingeka.
Ukuvimbela nokunakekela isikhumba esifanele
Uma wazi ngokwakho ukuthi i-abscess iyini, khona-ke uyaqaphela ukuthi kulula kakhulu ukuvimbela ukubukeka kwabo kunokuzama ukuzibulala kamuva. Yiqiniso, ayikho imithi yokuvimbela yonke indawo kuleli cala. Kodwa, ngokubheka imithetho ethile, unganciphisa ingozi yokuvela kwabo. Okokuqala, khumbula ukuthi isikhumba sidinga ukunakekelwa okuqhubekayo nokufanele, okumele kufake ukuhlanza okuvamile, ukudla okunomsoco, ukusondeza nokuvikelwa. Qaphela ngokucophelela ukukhethwa kwezimonyo, njengoba lokhu kuthinta impilo yesikhumba.
Ngaphezu kwalokho, isimo samathambo esikhumba, kanye nawo wonke ama-organ systems, sizothinteka kahle ngokudla okunomsoco - ukuphelisa ukudla okudliwayo nokudla okwesibhakabhaka, ukunciphisa inani lamaswidi.
Mayelana nendlela osteochondrosis yomlomo ephathwa ngayo
Iziphi izifo umuntu azithukumeza kakhulu? Izimbangela eziyinhloko ezithinta ukujuluka
Ukwelashwa kwe-hydradenitis: kukhona indlela yokuphuma!
Tatiana Lisova kanye biography wakhe
Indlela ubhale inothi ephephandabeni. Article ephephandabeni: isibonelo lokubhala
Munia: ukugcinwa kanye nokunakekela. amathiphu ornithologists
Yokudlela "Ilayisi Fish", eMoscow: ikheli, izithombe kanye nokubuyekeza